प्रेम दिवस र प्रेमिल मनहरू | Kendrabindu Nepal Online News
प्रेम दिवस र प्रेमिल मनहरू
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १५:१४
हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा मनाइन्छ प्रेमदिवस । प्रेम दिवसको शुरुवातको कुरा एकातिर होला तर हरेक वर्ष यसकै प्रतिक्षामा रहनेहरुको कथा व्यथा पनि अर्को रहन्छ । ‘किन प्रेम दिवस ?’ भन्नेहरुका लागि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन । खासमा प्रेम गर्न दिवस नै कुर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
ओशोले भनेका छन्, “असली प्रेम भित्री मनदेखि गरिन्छ । त्यहाँ कुनै छलकपट हुँदैन, स्वार्थ हुँदैन । प्रेम त त्यो परमात्मा हो, जसलाई न देख्न सकिन्छ, न छुन र अनुभव गर्न नै । तैपनि मान्छेहरु भन्छन्, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, म तिमीबिना बाँच्नै सक्दिन, तिमी मेरो सबैथोक हौ ।”
तर यथार्थ ओशोले भने जस्तो भएपनि वास्तविकता फरक छ । हिजोआज प्रेमको नाउँमा नाटक गर्नेहरुको पनि कमी छैन । सिमित स्वार्थका लागि प्रेमको हत्या गरिन्छ तर उदाहरण मुनामदनको जस्तो दिइन्छ, लैनामजनुको जस्तो दिइन्छ । स्वार्थ सकिए पछि निमोठिन्छन् ती मुनामदनहरु, लैनामजनुहरु ।
प्रेमको परिभाषा पनि मान्छे अनुसार फरक फरक हुन्छ । ठ्याक्कै यही हो भन्न कठिन छ । न यसको अर्थ शब्दकोशमा भनिए जस्तो परिभाषाले मात्रै पुग्ने नै हो । बुबाआमाले छोराछोरीलाई गर्ने प्रेम, परिवारका सदस्यहरुबीचको प्रेम, गुरुले आफ्ना शिष्यलाई गर्ने प्रेम अनि छोराछोरीले आमा बालाई गर्ने प्रेम । यी सबै प्रेमका उदाहरण भएपनि हिजोआज प्रेमको परिभाषा प्रेमिप्रेमिकाबीच मात्र जोडेर हेरिन्छ । मानौ प्रेम भन्ने चिज ती दुई प्राणीहरुमा मात्रै हुन्छ । यो शब्द उनीहरुका निजी शब्द हो जसरी । त्यसो भए के उनीहरुले प्रेम के हो भनेर बुझेका छन् ? यो सोचनीय विषय हो । बाहिरी आवरण हेरेर गरिने प्रेम प्रेम होइन भन्ने बुझ्न बाँकी छ उनीहरुले ।
प्रेमको अर्थ जे भएपनि प्रेम दिवस सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमका लागि गरेको बलिदानको सम्झनामा मनाइन्छ । उनको सम्झना एकातिर होला तर प्रेम दिवसकै लागि भनेर अनावश्यक खर्च गर्ने र तडकभडक देखाउनेहरुको संख्या पनि समाजमा धेरै नै छ ।
विश्वको कुरा नगरौं, नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रेम दिवसको पर्खाइमा रहनेहरुको संख्या धेरै नै रहेका छन् । यही दिवसका लागि भनेर २ करोडको गुलाबको फूल आयात गरिएको तथ्यांक छ । यो एउटा प्रेम दिवसका लागि मात्रै हो । वर्षेनी यसको अनुपात बढिरहेको छ । गुलाबको माग र खपत यस दिन अरु बेला भन्दा बढी हुन्छ ।
प्रेम दिवस एकदिन मात्र मनाईंदैन । यसलाई सप्ताहको रुपमा मनाउने चलन छ । प्रेम, प्रेम दिवस र प्रेमभावको यथार्थ भन्दा पर गएर विकृतिका रुपमा मनाउनेहरुले साँच्चै प्रेमलाई बुझे जस्तो लाग्दैन । हरेक दिन गर्नु पर्छ प्रेम, हरेकलाई गर्नुपर्छ । तर प्रेम गर्ने तरिका भने फरक हुन्छ । यो सत्यतालाई भुलेर समाज यतिबेला प्रेमलाई बाहाना बनाउँदै छ । घरि घरि प्रेमलाई घाइते बनाउँदैछ । प्रेमले कसैलाई पनि ‘खर्च गर’ भन्दैन, न यसले कसैको ‘हत्या गर’ भन्छ ।
प्रेममा जर्बजस्ति हुँदैन, तर हिजोआज जर्बजस्ती गरिन्छ । कसैले कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेन भने आफू पनि मर्ने र अरुलाई पनि मार्ने सम्मको अपराध हुन्छ समाजमा । हामीले देखेका छौं, भोगेका छौं । यतिबेला मान्छेहरु भन्छन्, प्रेम अन्धो हुन्छ । भलै प्रेम अन्धो होला, तर प्रेमको भित्री परिभाषाले भन्छ ः प्रेम अन्धो हुँदैन, तिम्रो हेराई अन्धो भएको हो । प्रेम जहिले गरे पनि हुन्छ । जसरी गरेपनि हुन्छ तर दुरुपयोग गर्न भने हुँदै हुँदैन । बाहिरी आडम्बरमा गरिएको प्रेम कहिले सफल भएको छ र ? यसले समाजलाई पनि त नकारात्मक दिशातर्फ धकेलेको छ नि ।
खासमा प्रेम त ढुंगालाई पनि गर्नुपर्छ । सोच्नुस् त, एउटा एउटा ढुंगा जोडेरै त सिंगो घर बनेको छ । यदि त्यो ढुंगा थिएन भने घर बन्थ्यो ? प्रेम त जनावरसँग पनि गर्नु पर्छ । उदाहरणको रुपमा कुकुरलाई हेरौं त, तपाईं जतिसुकै गाली गर्नुस्, पिट्नुस्, बेलुका घर पुग्दा पुच्छर हल्लाएर स्वागत गर्छ । तपाईंले गरेको गालीलाई न उसले इगोको रुपमा लिन्छ न त्यो कुटाइको बदला लिन्छ । त्यो कुकुरको जति पनि प्रेम गर्न सकिएन भने के को प्रेम दिवस ? के को भ्यालेन्टाइन डे ?
बरु मान्छेहरु भन्छन्, कुकुर जस्तै छ यो त । त्यतिबेला बिर्सन्छन् उनीहरु कुकुर कति इमान्दार र बफादार छ भनेर । उसको जति प्रेम मात्र गरे पनि समाज बदलिन्छ । ब्यक्तिको इमान्दारीताले नै हो प्रेमलाई परिभाषित गर्ने ।
नैतिकता र इमान्दारीताको असली स्वरुप हो प्रेम । तर अहिले त यी दुवैमा खडेरी लागेको छ । प्रेमिल मनले मनाउनुस् प्रेम दिवस, देखावटी र बनावटी तरिकाले होइन । प्रेमलाई सकारात्मकता दिन वर्षको एकदिन मात्र कुर्नु पर्दैन । प्रेम गर्नेहरुका लागि ३६५ दिन नै पनि कम हुन्छ भने एकदिनको प्रेम दिवसले के दिन्छ, कसलाई दिन्छ, कति दिन्छ ?
जतिसुकै आदर्श छाँटे पनि भित्री मनदेखि कसैलाई मन पराइन्छ भने र आखिरमा ऊसँग छुटिनुपर्छ भने ऊ भन्दा लाखौं माया गर्ने मान्छे भेटियो भने पनि उसको यादले सताइरहन्छ । आर्दश बनाउँछ । कवि, साहित्यकार, गजलकार सबैको अनुभव दिलाउँछ । साँच्चै प्रेम महान छ । जय प्रेम दिवस ।
प्रेम दिवस, प्रेमिल मन
Prev‘ए’ डिभिजन लिग : हिमालनय शेर्पाद्वारा एनआरटी पराजित
कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभावNext
प्रणय दिवस: गत वर्षकाे तुलनामा गुलाफकाे माग घट्यो
‘प्रेम दिवस’ को पोष्टरमा पोखियो प्रियंका र आयुषमानको प्रेम